Ahoana no hanombohana URL tsara ny URL hiverina amin'ny tranokalanao?
Ireo olona izay mamaky ity lahatsoratra ity dia mety ny hanao izay tsara indrindra vitany mba hanatsarana ny ezaka SEO sy hanatsara ny fahitana marika amin'ny SERP. Nanao asa be dia be tao amin'ny tranokalanao ianao mba hampiroborobo ny ezaka fanatsarana ny tranokalanao, saingy mbola tsy misy vokany. Noho izany, fotoana izao hijerena izay azonao atao amin'ny tranokalanao. Efa mba nieritreritra momba ny URL-n'ny URL ianao ary inona no mety ho fiantraikany eo amin'ny mombamomba azy ireo? Ny famoronana SEO URL tsara tarehy dia iray amin'ireo fomba fampivoarana lehibe indrindra izay tsy afaka omena anao raha te-hahazo fitohanana mifandraika amin'ny tranokalanao. Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hianatra fotodrafitrasa goavana fototra momba ny famoronana URL-n'ny URL azo havaozina tsara.
Fomba hanatsarana URL backlink
Tsarovy ny singa olombelona
Ny fitsipika voalohany tokony arahinao site dia ny tokony hataonao rehetra mba hahasoa ny mpitsidika anao. Ny fitaovam-pikarohana dia mankasitraka sy manome valisoa ireo tranonkala manome ny traikefan'ny fikarohana feno. Amin'izao fotoana izao dia tena zava-dehibe ny fametrahana azy. Izany no mahatonga anao tsy tokony hiahiahy momba ireo botsika Google izay manadihady ny tranonkalanao, fa koa momba ny dikantenin'ny mpampiasa ny URL -nao satria mety hisy fiantraikany goavana amin'ny fikarohana karazana fikarohana.
Ohatra, raha jerena loatra sy sarotra loatra ny URL-nao, dia tsy hikirakira fotsiny amin'ny mpanjifanao ny mpanjifanao mety aminao.Vokatr'izany dia hanapaka ny isan'ny olona tonga eo amin'ny tranokalanao ary handroaka ny ezaka fanatsarana ny fikarohana.
Noho izany, raha mamorona URL backlink amin'ny tranokalanao ianao, dia tokony hitadidy ireto singain'olombelona ireto ianao:
Fitsipika, mpampiasa mikarokaroka ny valin'ny fikarohana, miezaka ny mamela ireo domains toy ny. net or. biz satria heveriny ho toy ny kalitao toy ny kalitao, ny tsy mendrika ary ny spammy. Ny mpampiasa dia mora kokoa amin'ny tsindry amin'ny vohikala manana safidy sy fahatokisana. Ohatra, ny. com domains dia heverina ho mendri-piderana sy azo itokisana kokoa. Izany no antony ilanao ny mahita izany rehefa mifidy sehatra iray mifanaraka aminao ianao.
URL mpamaky mora kokoa
Raha tsy afaka mahatakatra tsara ny URL-nao URL ireo mpanjifanao mety aminao, dia tsy dia manam-bintana firy ny fifamoivoizanao any amin'ny tranonkalanao ary manova azy amin'ny fivarotana. Ny olona rehetra dia handeha amin'ny tranokala iray izay tsy azo vakiana.
Ampiasao ny tenimiafina
Search terms lay tao anatin'ny fanentanana ny fanentanana fanentanana ataonao sy hamoronana ny tranonkalanao aty anaty aterineto. Adihevitra mendri-piderana ny hampidiranao azy ireo ao amin'ny URL -nao satria fotoana mahafinaritra azonao hananana ny orinasanao an-tserasera. Amin'ny fametrahana ny volavolan-tadiavam-peo voafaritra tsara ao amin'ny URL-nao, dia avelanao ny mpihaino voafantina hahafantarana izay mety ho hitan'izy ireo manaraka ny tranokalanao.Rehefa mandefa valiny mety amin'ny fangatahan'ireo mpampiasa ny Google, dia mijery ny teny fanalahidy ao amin'ny URL. Ny URL iray tsara kokoa dia manome hevitra momba ny botsikilovana fikarohana raha te-hanadihady ny tranokalanao izy ireo na tsia, toy ny amin'ny URL ahafahany mijery ny votoatin'ny tranonkala. Ataovy azo antoka fa tsy mampiasa teny fanalahidy averimberina ao amin'ny URL -nao ianao fa tsy hisy vokany toy izany amin'ny endriky ny teny filamatra miavaka sy manan-danja Source .